एन्टिजेन किट कहाँ कति ? - NewsNepal HD
By न्युजनेपाल एच.डी	 On ६ भाद्र २०७८, आईतवार १२:५५
काठमाडौँ — ६ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, कोरोना भाइरस संक्रमणको द्रुत परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने एन्टिजेन किट स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्लाहरूमा पठाए पनि न्यून प्रयोग भएको पाइएको छ । केही जिल्लामा किट सदुपयोग भए पनि अधिकांशमा त्यत्तिकै थन्किएका छन् । स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायले कोरोना परीक्षणको दायरा नबढाउँदा एन्टिजेन किटको प्रयोग न्यून भएको हो ।प्रदेश १ को स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरमा ९ हजार ३ सय ५३ एन्टिजेन किट मौज्दात छ । ती किटको म्याद सन् २०२३ मार्च ३१ सम्म रहेको स्टोरकिपर मानबहादुर मगरले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ९९ हजार ४ सय ५० एन्टिजेन किट आएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म १ लाख ३१ हजार १ सय ३२ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३७ हजार ७ सय १७ जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ । हालसम्म प्रदेशमा आएको कुल २ लाख ४९ हजार ४ सय ५० किटमध्ये आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले २ लाख ४० हजार ९७ वितरण गरेको छ । स्थानीय तहलगायत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै १ लाख ८ हजार ९ सय ६५ किट मौज्दात छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेश मेहताले आफ्नो कार्यालय र जिल्लाभरिका स्वास्थ्य संस्थामा मौज्दात रहेको एन्टिजेनको म्याद गुज्रिने समय स्न २०२२ र २०२३ सम्म रहेको बताए । झापा स्वास्थ्य कार्यालयलाई वैशाख दोस्रो सातालगत्तै गरी ३० हजार थान किटमध्ये अहिले ५ हजार मौज्दात छ । कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन जीवन चम्लागार्इंले मन्त्रालयबाट प्राप्त अधिकांश किट प्रयोग भइसकेको दाबी गरे । ओखलढुंगामा १० हजार ५ सय ७५ किटमध्ये १ हजार २ सय बाँकी भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी पुष्पराज पन्तले बताए । ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल मिसनले १ हजार शुल्क लिएर आफैं किट खरिद गरेर परीक्षण गर्दै आएको छ ।
दुई लाखमध्ये २५ हजार मात्र प्रयोग
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै प्रदेश २ मा आएको २ लाख एन्टिजेन किट धेरै संख्यामा प्रयोगमै आएको छैन । वैशाख अन्तिम साता संघीय सरकारले २ लाख एन्टिजेन उपलब्ध गराएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपूर्ति महाशाखाले उक्त किट प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई हस्तान्तरण गरेको आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले जानकारी दिए । २ लाख किटमध्ये करिब २५ हजार मात्र प्रयोगमा आएको प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवण मिश्रले बताए । प्रदेशमा दैनिक २ सयभन्दा कमले मात्रै पीसीआर परीक्षण गराइरहेका छन् । प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा पीसीआर प्रयोगशाला छ । हरेक जिल्लामा प्रतिदिन ३ सय र जनकपुरको प्रादेशिक प्रयोगशालामा एक दिनमा १ हजारभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण हुने क्षमताको मेसिन छ ।
उपत्यकाबाहेक ९० प्रतिशत किट खपत
वाग्मती प्रदेशमा उपत्यकाबाहेक हरेक जिल्लामा ४ हजारदेखि १६ हजारसम्म एन्टिजेन किट स्वास्थ्य कार्यालयमा गएको छ । स्थानीय तहले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खपत गरिसकेका छन् । बाँकी किटको म्याद आगामी फेब्रुअरीसम्म छ ।मकवानपुर स्वास्थ्य कार्यालयमा आएका १५ हजार किटमध्ये ८ सय बाँकी छन् । तिनीहरूको म्याद अझै ४ महिनाभन्दा बढी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख प्रणय उपाध्यायले बताए ।
चितवनमा प्राप्त १६ हजार किटमध्ये ३ हजार ५ सयमात्र बाँकी छन् । ‘ती पनि महिना दिनभित्र खपत हुन्छन्,’ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दीपक तिवारीले भने । स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीमा आएको ४ हजार किटमध्ये ३ हजार ५ सय प्रयोग भइसकेको छ । वरिष्ठ स्वाथ्य अधिकृत दुर्गादत्त चापागाईंका अनुसार सदरमुकाममै दुई हजारभन्दा एन्टिजेन किट मौज्दात छन् । धादिङ स्वास्थ्य कार्यालयमा उपलब्ध ४ हजार किटमध्ये १ हजार ७ सय खपत भएको र बाँकीको म्याद अझै ५ महिना छ ।
गण्डकीमा ३५ हजारभन्दा बढी प्रयोग भएन
गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अस्पतालमा बाहेक १ लाख ५ हजार २ सय ७० एन्टिजेन किट प्राप्त भएकोमा ७० हजार ५ सय ५८ किटको प्रयोग भइसकेको छ । अझै ३४ हजार ७ सय १२ किट प्रयोग हुन बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालहरूको तथ्यांकले देखाउँछ ।प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका फार्मेसी सुपरभाइजर निरज तिम्सिनाका अनुसार प्रदेशमा हालसम्म २ लाख २८ हजार ६ सय एन्टिजेन किट प्राप्त भएकामा १ लाख ८५ हजार १ सय २८ किट प्रदेशका सबै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरूमा पठाइसकिएको छ । मौज्दात किटको म्याद सन् २०२२ को जनवरीदेखि २०२३ मार्चसम्म छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गोरखामा ८ हजार ५ सय किट थन्किएका छन् ।
भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक रामरिजन यादवका अनुसार सन् २०२२ को मेमा म्याद सकिने ३ हजार ४ सय किट छन् । सन् २०२३ सम्म म्याद थप भएका ५ हजार १ सय किट रहेको उनले बताए ।म्याग्दीमा आएका ८ हजार ३ सय ७५ किटमध्ये ५ हजार ३ सय ६९ प्रयोग गरिएका छन् । बाँकी किटको म्याद सन् २०२३ सम्म रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश सुवेदीले बताए । मुस्ताङमा ३ हजार १ सय २० किट लगेकामा २ हजार ५ सय मात्र खर्च भएको छ । कास्कीमा १९ हजार किट आएकामा १६ हजार खर्च भएर ३ हजार बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बाबुराम आचार्यले बताए ।
किट छ, परीक्षण छैन
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले परीक्षण शून्यजस्तै छ । कोरोनासित मेल खाने लक्षण देखिएका र उपचारका लागि अस्पताल पुगेकाले मात्रै परीक्षण गरिरहेका छन् । संक्रमितले अस्पतालका बेड भरिन थालेका छन् । समुदायमा परीक्षणका लागि एन्टिजेन किट उपलब्ध भए पनि परीक्षण भइरहेको छैन ।पश्चिम नवलपरासीमा ७ हजारको एन्टिजेन परीक्षण भइसके पनि शुक्रबारसम्म ७ हजार किट मौज्दात छ । नेपाल–भारत सीमा पार गर्दा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण र एन्टिजेन गर्नुपर्ने भए पनि यहाँ भारतीय नाका भएर आवतजावत गर्नेको पनि परीक्षण गरिएको छैन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार शुक्रबारसम्म १ हजार ६ सय ६५ किट मौज्दात छ । बाँकी ५ हजार ५ सय जिल्लाका सात पालिकामा पठाइएको छ ।
अर्घाखाँचीमा एक साताअघि जनस्वास्थ्य कार्यालयले ल्याएको ३ हजार किटमध्ये ५ हजार मौज्दात छ । जिल्ला अस्पतालमा दैनिक १० देखि १ सय जनासम्मको एन्टिजेन परीक्षण हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय बरालले बताए ।रूपन्देहीमा प्राप्त २७ हजार किटमध्ये हरेक पालिका र सीमा नाकामा गरी २२ हजार प्रयोग भएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले बताए । ‘सन् २०२२ सम्म म्याद छ,’ उनले भने, ‘मिति सकिने भनेको पहिले नै ल्याएर प्रयोग नगरिएका किटको हो ।’ अहिले जिल्लामा हुनुपर्ने परीक्षण दायरा घटिरहेको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा गत वैशाखमा आएको १ लाख ५६ हजार किटमध्ये २५ हजार मौज्दात रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनीका कोरोना फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले बताए । उनले ती किटको म्याद २०२३ सम्म रहेकाले आत्तिनु नपर्ने बताए ।
कर्णालीका अधिकांश जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहमा एन्टिजेन किट थन्किएका छन् । स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायहरूले कोरोना परीक्षणको दायरा नबढाउँदा कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लामा किट थन्किएका हुन् । कालीकोटमा कोरोना परीक्षणका लागि आएको १० हजार थानमध्ये ३ हजार मौज्दात छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका अधिकृत कटक महतका अनुसार कालीकोटमा अहिलेसम्म ४ हजार ५ सय ३ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १ हजार ५ सय ५१ जनामा कोरोना संक्रमण भएको थियो ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्लाका ८ स्थानीय तहमा एन्टिजेन विधिमार्फत कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख कृष्ण सापकोटाका अनुसार सरकारले ७ हजार किट पठाएकामा अहिले प्रत्येक स्थानीय तहसँग ३ सय र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा १ हजार ५ सय थान बाँकी छ । दैलेखमा जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाइएका झन्डै ३४ हजार किट प्रयोगविहीन बनेको छ । यो वर्ष ५ सय किट मात्र प्रयोगमा आएको निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक थिरप्रसाद रेग्मीले बताए । रुकुम पश्चिममा ३ हजार १ सय थान एन्टिजेन किट मौज्दात छ । ‘सबैतिर एकैपटक र एउटै ठाउँबाट किट ल्याइएकाले सबैको म्याद झन्डै वर्ष दिनको छ,’ जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी जनक खड्काले भने, ‘यहाँ मौज्दात भएका किटको म्याद आगामी २०२२ को ४ महिना २२ गतेसम्म छ ।’
सुदूरपश्चिममा ६५ हजारभन्दा बढी मौज्दात
सुदूरपश्चिममा शुक्रबारसम्म १ लाख ३ हजार २ सय ५६ जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीका निमित्त प्रमुख लक्ष्मीराज श्रेष्ठका अनुसार ०७७ साउनदेखि हालसम्म एक लाख ७८ हजार ८ सय ५० किट एन्टिजेन किट प्राप्त भएको छ । त्योमध्ये केन्द्रको भण्डारणमा हाल १० हजार किट मौज्दात छन् । आपूर्ति केन्द्रको अभिलेख र मौज्दातअनुसार ६५ हजारभन्दा बढी किट जिल्ला र पालिकास्थित स्वास्थ्य संस्थामा मौज्दात देखिएका छन् ।
स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीका अनुसार सुदूरपश्चिममा हालसम्म एन्टिजेन किटको म्याद गुज्रिएको जानकारी जिल्लाबाट प्राप्त भएको छैन । तर, अछाममा सुरुमा प्राप्त किटको म्याद २/३ महिना मात्रै बाँकी छ । अछाम स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन मीन कुँवरका अनुसार जिल्लामा २०७७ साउनयता हालसम्म १४ हजार ५ सय किट प्राप्त भएकोमा १० हजार ८ सय स्थानीय तहमा पठाएको र स्वास्थ्य कार्यालयमा २४ सय मौज्दात छ ।